Fomba fahandro tsy mahazaka atody miaraka amin'ny Thermomix | ThermoRecipes (Pejy 2)
Efa nanandrana ireo croquettes brie sy ham vita tamin'ny Thermomix® ve ianao? Mamy sy malama ka tsy hamela na dia iray aza!
Tianao ve ny manatsara ny tsiron'ny lasopy? Asehonay anao ny fomba fanaovana takelaka misy hena karazana Avecrem®.
Te-hanamboatra tsindrin-tsakafo mahazatra ve ianao ho an'ny vegan? Andramo ity fomba fahandro ity amin'ny vary misy ronono soja, dia hahagaga anao izany.
Krosy malefaka amin'ny karaoty sy voasary
Ahoana ny hevitrao raha manomana crème malefaka misy karaoty sy voasary isika? Ho tianao izany noho ny lokony mahery, ny tsirony ary ny vitaminany.
Mankaleo amin'ny fomba fanamboarana lentila mitovy? Te hanomana zava-baovao ve ianao? Andramo ny puree exotic miaraka amin'ny lentila ... dia ho gaga ianao.
Amboara hena miaraka amin'ny labiera
Mba hanomanana an'io laoka labiera io dia azonao ampiasaina ilay tianao indrindra. Samy hanome tsiro hafa ny saosy ny tsirairay.
Horita saosy miaraka amin'ny saosy voatabia
Reraky ny sakafo hariva tsy misy dikany ve ny zanakao? Andramo ity fomba fanamboarana mahafinaritra ity ho an'ny horita saosisy sy saosy voatabia homemade.
Tsy misy fotoana hanomanana sakafo hariva? Asehontsika anao ny fomba hanomanana artichokes amin'ny ham. Lovia mahasalama, haingana ary mora miaraka amin'ny Thermomix®.
Mieritreritra ny hikarakara sakafo manokana ve ianao? Amin'ity fomba fahandro ity ho an'ny tongotr'ondry misy apricots sy plum maina dia handresy ny tsirony ianao.
Manaingo ny puree amin'ny paoma sy parsnip
Adino ny frites frantsay! Manomàna garnish matsiro miaraka amin'ny paoma sy parsnip. Ity safidy ity dia manana kaloria vitsy kokoa.
Ireto coquitos ovy ireto dia mety tsara aroso aorian'ny sakafo hariva. Sakafo veganina matsiro, tsy misy gluten, afaka atody ary tsy misy lactose.
Spirals misy fromazy osy
Te hampiditra fibre bebe kokoa amin'ny sakafonao ve ianao? Manoro hevitra anao izahay hanomana ireo spirals miaraka amin'ny fromazy osy. Ho gaga ianao amin'ny tsirony.
Macaroni miaraka amina felam-boasary voatabia sy sakay
Mankaleo ny fomba fanamboarana paty mitovy? Andramo ireto macaroni matsiro miaraka amin'ny tenderloin marinated sy dipoavatra vita amin'ny Thermomix.
Ity dika amin'ny spaghetti carbonara tsy misy atody ity dia fomba fanamboarana pasta matsiro miaraka amin'ny bacon, crème ary fromazy.
Tianao ve ny fomba fahandro mahazatra? Avy eo dia mila manandrana ireto tripe-style Madrid ireto ianao. Manaikitra manaitra ny gastronomy Espaniola.
Maniry zavatra vaovao hiadiana amin'ny tolakandro mafana? Mahafinaritra sy vonona ao anaty 2 minitra ity fihorohana sôkôla ity
Voanjo misy ham
Ny pitipoà misy ham dia azo atao mialoha mba hisakafoanana sakafo mahasalama sy mahasalama ary misy vitamina sy feno mineraly.
Puree ovy sy karaoty
Ity puree ovy sy karaoty ity dia azo ampiasaina miaraka amin'ny lovia hena sy trondro ary manome vitamina sy mineraly fanampiny.
Veal miaraka amin'ny saosy sy vary miaraka amin'ny voaloboka sy amandy
Te-hanomana fomba fahandro matsiro ho an'ny fianakaviana iray manontolo ve ianao? Atorinay anao ny fomba fanomanana ny hen'omby miaraka amin'ny saosy sy vary miaraka amin'ny voaloboka sy amandy.
Amin'ity crème holatra ity dia hankafizanao ny fomba fahandro maivana sy mahasalama ary mahasalama. Aza atsahatra ny fampiasana azy io amin'ny sakafo hariva.
Paoma miaraka amin'ny kanelina
Tianao ve ny misakafo maraina miaraka amin'ny toast? Avy eo dia mila manandrana ity paoma paoma ity ianao. Mora sy matsiro tokoa ka averinao.
Fanangonam-bokatra (crème legioma)
Manana legioma betsaka ve ianao ary tsy fantatrao izay hatao aminy? Manolotra anao izahay crème fampiasa mahavelona.
Vorona fromazy mascarpone
Te hanararaotra ny fromazy mascarpone ve ianao? Sahia amin'ity flan fromazy ity. Tsotra, haingana ary matsiro izany.
Saosy Pedro Ximénez
Tianao ve ny divay Pedro Ximénez? Avy eo dia mila manandrana ity saosy ity ianao. Tsotra sy matsiro tokoa izy io ka te hampiasa azy amin'ny zava-drehetra ianao.
Legioma sy trondro puree dia lovia iray faran'izay feno azonao ampiasaina ho an'ny ankohonana iray manontolo, indrindra ho an'ireo olona tsy misy faniriana mihinana.
Mofomamy sponjy "tsy misy atody"
Ankafizo ny mofomamy "tsy misy atody" ary miaraka amin'ny tsiro mofomamy vita an-trano. Ampiasao amin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahanao na tsakitsaky.
Mofo akondro, kanelina ary tantely
Te-hanomana mofomamy tsy misy atody ve ianao? Atorinay anao ny fomba fanomanana akondro, kanelina ary mofomamy.
Risotto fromazy efatra
Efa nanandrana nanao an'ity risotto fromazy efatra ity ve ianao amin'ny Thermomix® anao? Inona no andrasanao? Mora ary ny vokany dia vary mahasosotra tsy mampino.
Mitady fomba fahandro matsiro entina any amin'ny birao? Andramo ity kôdà sy lasantsy udid ... tianao io !!
Fantatrao ve fa afaka mangatsiaka voatabia nendasina ianao? Omano ity fomba fahandro ity, atsiro amin'ny ampahany ary ampiasao rehefa mila izany ianao.
Stew ron-kena miaraka amin'ny akoho
Miaraka amin'ity hatsiaka ity dia te-hanamboatra ron-kena am-bazaha ianao. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy io tsy misy preservatives na loko.
Sahy manomana marmitako ao amin'ny Thermomix® ve ianao? Namboarinay ity fomba fahandro nentim-paharazana ity mba hahafinaritra anao fotsiny ny mahandro.
Mba hanomanana ny sambo tongolo lay dia mila mampiasa akora tsara kalitao ianao. Aroso anaty vilany tanimanga izy ireo mba hitazomana ny hafanana rehetra.
Squid amin'ny salsa amerikana
Fantatrao ve fa azonao atao ny manamboatra an'ity fomba fahandro ity amin'ny saosy amerikana miaraka amin'ny hena mangatsiaka? Ankafizo ny sakafo matsiro sy tsy lafo.
Ianao ve mitady sakafo maraina manankarena nefa te hikarakara ny sakafonao? Andramo ity paoma maivana ity. Ny tsiro rehetra ary ny kaloria kely.
Tianao ve ny fomba fahandro mahasalama? Manoro hevitra anao izahay mba hanao bass bass en papillote. Fomba iray mahaliana hikarakarana ny tenanao.
Sakafo hariva ao anatin'ny 10 minitra latsaka? Eny, miaraka amin'ny Thermomix® anao dia azonao atao ny manomana an'io resina epinara spinalan Catalan io.
Tongolo lay fotsy
Te hanana fiomanana voalohany ve ianao rehefa mody? Manoro ny fomba fahandro mora sy haingana toa ny ajoblanco izahay.
Mitady sakafo maivana fahavaratra milay? Izahay dia manolotra anao ity malama malama mananasy ity. Resipeo mora sy haingana miaraka amin'ny voankazo sy ronono.
Te hanana fiainana salama ve ianao ary mila fomba fahandro mahasalama? Andramo ity kiwi sy salady prawn ity, haharesy lahatra anao ny tsirony.
Lasopy kôkômbra sy yaorta mangatsiaka
Mila fomba fahandro haingana, mahasalama ary mahavelombelona ve ianao? Atorinay anao ny fomba fanomanana lasopy kôkômbra sy yaorta mangatsiaka ao anatin'ny 3 minitra.
A gilasy mangahazavana
Mitady fomba fahandro sahaza ny diabetika? Ity misy gilasy mangahazavana mamelombelona. Mahafinaritra sy mora !!
Vary lasopy misy hena sy udid
Amin'ny akora tsotra vitsivitsy dia azonao atao ny manamboatra an'io lasary vary io amin'ny angisy sy ny hena. Mety ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Ianao ve mila resipeo alaina ary afaka misakafo any amin'ny birao? Atorinay anao ny fomba fanaovana paty sinoa, miaraka amin'ny paty, legioma ary hena.
Te-hanomana Actimel® an-trano ve ianao? Mora sy tsotra tokoa izy io ka na ny ankizy aza dia afaka manampy anao amin'ny fanomanana izany ao an-trano.
Manana andro be atao rahampitso ve ianao ary te-hamita ny sakafonao? Manoro an'ity bonito ity amin'ny voatabia izahay. Mora sy tsotra.
Amin'ity fomba fahandro ity ho an'ny clams a la marinara dia hanana làlana voalohany matsiro ianao, tsotra ary haingana dia haingana fa ho vonona am-potoana vitsivitsy ianao.
Amin'ity fomba fahandro tsotra ity ho an'ny akoho chiffindrón dia hankafy ny tsiro rehetra amin'ny saosy miorina amin'ny holatra ianao.
Tono akoho amin'ny saosy
Efa nandamina maraina teo amoron-dranomasina ve ianao ary te hamela ny sakafo efa nomaninao? Andramo ity fomba fahandro amin'ny tratra akoho ity amin'ny saosy.
Tratra akoho volomboasary
Amin'ity fomba fahandro matsiro ity, ny akoho volomboasary dia manana tsiro malefaka mifangaro. Lovia haingana sy tena azo ampiharina amin'ny sakafo hariva.
Akoho miaraka amin'ny anana
Tianao ny fomba fahandro maivana? Andramo amin'ny anana ity akoho ity. Mamy ny hena ary matsiro ny saosy.
Tongotra amponga akoho misy saosy paiso
Araraoty tsara ny varoma amin'ity resipeo ity ho an'ny fe akoho misy saosy paiso! Lovia tsotra ho an'ny fianakaviana manontolo.
Paiso amin'ny syrup
Tianao ve ny manomana ny fitehirizana anao? Amporisihinay ity fomba fahandro ity ho an'ny paiso am-pitoerana mba hankafy ny tsirony.
Tsy hitovy amin'ny sakafo matsiro blackberry anao izao ny sakafo maraina. Araraoty ny fomba hanaovana izany ao an-trano amin'ny fomba tsotra.
Efa nividy mananasy ve ianao ary tsy fantatrao izay hatao aminy? Andramo ity paoma mananasy mahafinaritra ity. Tonga lafatra amin'ny fanomanana sakafo maraina tropikaly.
Krema mangatsiaka avy amin'ny boka sy paoma
Amin'ity crème mangatsiaka sy paoma mangatsiaka ity dia ho gaga ianao amin'ny endriny sy ny tsiro matsiro. Mety amin'ny fikapohana ny hafanana sy ny fijanonan'ny rano.
Cocktail melon sy orange
Mila zava-pisotro vahiny amin'ny fety ve ianao? Andramo ity cocktail melon sy orange ity. Miaraka amin'ny Thermomix® anao ao anatin'ny 1 minitra dia ho vonona izy.
Ity lasopy kôkômbra sy yaorta mangatsiaka ity miaraka amina fihodinana mangatsiaka dia haingana dia haingana toy ny maivana. Mety hikarakarana ny tenanao miaraka amin'ny Thermomix® amin'ny fahavaratra.
Sorbet vita amin'ny frezy miaraka amin'ny champagne
Manana frezy frezy ve ianao? Mandrosoa ary amboary ity sorbet frezy misy champagne ity. Ho vonona afaka 3 minitra.
Mandrosoa ary amboary ity sorbet berry ity. Izy io dia mahasalama, voajanahary, mamelombelona ary manana ny zavatra tsara rehetra momba ny voankazo.
Ity sorbet pastèque ity ho fanampin'ny famelombelona dia hanampy anao hifehy kaloria nefa tsy mahafoana ny fahafinaretana mankafy ny fahavaratra.
Manana voankazo mangatsiaka ve ianao ka te hanome azy io? Atorinay anao ny fomba fanaovana sorbet mandarin matsiro na miaraka amin'ny voankazo hafa.
Mofo vita amin'ny paoma sy walnut
Miaraka amin'ity mofo paoma sy legioma ity dia hanana safidy vegan hafa ianao hankafizanao sakafo maraina manokana.
Ny ovy voatabia amin'ny henan-kisoa dia sakafo matsiro ho an'ny sakafon'ny fianakaviana amin'ny faran'ny herinandro.
Aty misy tongolo
Amin'ity fomba fahandro ho an'ny tongolo aty ity dia azonao atao ny mankafy ny tsiro rehetra amin'ny làla voaomana mora sy tsotra.
Miara-miasa miaraka amin'ny legioma mahandro
Ity fomba fahandro hake ity miaraka amin'ny legioma nohamainina dia resipeo mahasalama sy haingana ary tena feno mba hankafizanao ny tsiro amin'ny fikarakaranao tena.
Sôkôla fotsy sy volo sokola ronono
Ity flanety sôkôla sy ronono fotsy ity dia tsindrin-tsakafo matsiro sy tsotra izay azonao atao mialoha.
Tsy mora sy azo antoka toy izao ny fanomanana caramel ranoka amin'ny Thermomix. Ampiasao izany hanamboarana mpiambina sy fomba fahandro hafa mahafinaritra.
Vary misy taolan-tehezana
Ity vary misy taolan-tehezana ity dia mety amin'ny fianakaviana iray manontolo satria tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe izany. Resipeo tena ilaina ao amin'ny bokinao.
Vary endrika Nelba (tsy misy atody)
Amin'ity vary Nelba-style ity dia azonao atao ny mankafy lovia mora azo, voalanjalanja miaraka amin'ny legioma bebe kokoa ary indrindra tsy misy atody.
Voatavo voatavo miaraka amin'ny fromazy osy
Krim-voatavo mahafinaritra miaraka amina fromazy osy miempo ao anatiny. Mifanohitra matsiro ny tsiro.
Salmon tartare miaraka amina fotom-bary sushi
Tarton salmon mahafinaritra sy mahavariana amin'ny tanimbary marihitra mamy sy mahavariana. Ho an'ireo tia sakafo Japoney.
Volom-boasary, voasary, serizy ary ronono soja
Aza adino ny fotoana hanandramana ilay malama, frezy, volomboasary, serizy ary ronono soja. Izy io dia zava-pisotro mety amin'ny olona tsy mahazaka.
Stroberiana miaraka amina granita sy yaourt
Amin'ity tsindrin-tsakafo frezy misy granita voasary sy yaourt ity dia hanana tsindrin-tsakafo matsiro sy mamelombelona ary haingana ianao.
Tsy mora sy haingana be toy izany ny fanomanana izany gilasy frezy voarozy izany. Namboarina tamin'ny frezy frezy sy Thermomix®.
Ny fanomanana an'io frezy lassi frezy io dia handany anao 2 minitra amin'ny Thermomix anao. Misotro mamelombelona toy ny mora.
Tuna lasagna miaraka amin'ny paty vaovao sy béchamel be menaka
Lasagna Tuna vita amin'ny paty vaovao sy saosy béchamel be menaka. Sakafo tena mahafinaritra sy mahavariana.
Pestiños mahazatra, Paska mahazatra na mamy Noely. Amin'ity tranga ity dia hanomana ny kinova Andalusian izahay, miaraka amin'ny rakotra tantely.
Koda vaovao miaraka amin'ny tongolo lay
Ny kaody vaovao miaraka amin'ny tongolo lay vita amin'ny varoma dia tolo-kevitra tsotra sy matsiro ho anao mba hankafizanao ny fitandremana ny tenanao.
Mofo tototry ny holatra
Mofomamy izay hofenointsika holatra sy dipoavatra anio, fa azonao omanina miaraka amin'ireo akora tianao indrindra.
Ny harena feno hazan-dranomasina any an-dranomasina dia hahagaga anao noho ny volony mamy sy ny famenoana matsiro mifototra amin'ny sambo sy akamaso.
Nougat sôkôla miaraka amin'ny hazavozavo
Ny nougat sôkôla miaraka amin'ny hazavozavo dia manankarena tokoa ary haingana sy haingana izy io hiomanana amin'ny Thermomix ka hahagaga anao.
Nougat amin'ny vato
Ny nougat amin'ny vato no mahazatra indrindra amin'ny Krismasy rehetra. Ankehitriny isika dia afaka manao izany mora foana any an-trano amin'ny Thermomix antsika.
Ny sôkôla mafana dia mety amin'ny fotoana rehetra. Ary koa amin'ny Thermomix dia tsotra be ny manao azy fa tsy kamo.
Valahin-kisoa miaraka amin'ny sira miaraka amin'ny saosy Pedro Ximénez
Ny felam-kisoa misy sira miaraka amin'ny saosy Pedro Ximénez dia vita amin'ny varoma amin'ny fomba tsotra ary mandresy foana.
Minono kisoa amin'ny vay roa
Miaraka amin'ity fomba fahandro ity ho an'ny kisoa mampinono amin'ny mpahandro roa vita amin'ny Thermomix dia ho toy ny chef tena izy ho an'ireo vahininao ianao.
Mussels in salpicón
Ireto akamaso ao amin'ny salpción ity dia fomba fahandro tena ilaina, maivana ary mora ampiasaina amin'ny Thermomix anao.
Amin'ity fomba fahandro ity ho an'ny saonakotrano dia hanana sakafo matsiro sy matsiro tany am-boalohany ianao mba hahagaga ny vahininao.
Mifohaza any cava
Ity fomba fahandro hake ho any cava ity dia matsiro. Aroso miaraka aminy ny saosy, mba hahafantaran'ny vahiny sy hankafizany ny tsirony.
Tongolo feno nofon-kena sy bacon
Ny tongolo tototry ny hena sy ny bacon dia tena mora ampiasaina ary azonao atao ny manamboatra azy mialoha.
Maso feno rà
Atorinay anao ny fomba hahatonga ny maso mpandatsa-drà miaraka amin'ny fromazy vaovao hanamboarana azy ireo ny fetinao Halloween na Samaín.
Fideuá mainty misy henan-trondro sy persily
Fideuá mainty matsiro sy miseho miaraka amin'ny angisy, miaraka amin'ny mayonnaise tongolo lay-paprika, no ho lovia lehibe hanaitra ny vahininay.
Salady chickpea, letisia ary feta fromazy dia aroso miaraka amin'ny akanjo tahini-voasarimakirana
Salady Chickpea miaraka amin'ny salady, fromazy feta, solila, kôkômbra, voanjo, oliva ary toast, miaraka amin'ny akanjo tahini sy voasarimakirana.
Ny aioli, aioli na ajoaceite dia saosy nentim-paharazana nahandro Mediteraneana, miorina amin'ny tongolo lay, menaka ary, farafaharatsiny amin'ny endriny valencien, atody atody,
Chana Masala, karieram-borona
Chana masala, kariva trondro mahatalanjona miaraka amina vary basmati. Sakafo tsy mampino feno tsiro avy any India.
Salmon, kôkômbra ary tartar quinoa misy saosy hummus
Salmon, kôkômbra ary tartar quinoa misy saosy hummus. Mpiorina mahafinaritra, miloko ary tsara. Izy io dia fitambarana tsiro sy firafitra tena izy.
Cauliflower miaraka amina crumb voatabia
Handrasinay ny cauliflower ao amin'ny Thermomix ary avy eo dia hatsatsika amin'ny creme masira vita amin'ny lafarinina, Parmesan, dibera, tongolo lay ary voatabia.
Ampianarinay ianao amin'ny fanomanana cookies muesli sy dibera tsotra. Tsy mila roller na bobongolo isika fa sotro roa fotsiny.
Gratin ovy fromazy telo
Fomba hafa mahandro ovy nendasina. Hanana tsiro mahery vaika izy ireo noho ny fromazy telo: fromazy manga, mascarpone ary Parmesan.
Mofomamy fromazy sôkôla sy akondro
Cheesecake vita an-trano izay tsy ampoizina amin'ny fifangaroany tsiro. Miaraka amin'ny tohan-bisikileta ary ampahany mamy amin'ny fromazy, sôkôla ary akondro.
Mpiambina voatavo Vegan
Ireo voatavo voatavo vegan vita amin'ny Thermomix tsy ho haingana, mora ary maivana kokoa. Ny tsindrin-tsakafo ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Halloween Imp Pills
Amin'ireto pilina ireto ho an'ny imp ianao dia afaka manomana fety Halloween mahasalama kokoa noho ny zava-mamy indostrialy. Raha ny marina,…
Mofomamy voanio sy sôkôla
Ity mofomamy ity dia mety ihany koa ho an'ny vegan raha misolo dibera amin'ny margarine sy yaourt ary ronono an'ny soja hafa isika.
Flan sôkôla tsy misy legioma sy tsiranoka
Ity flan sokola vegan sy tsy misy siramamy ity dia tsindrin-tsakafo mety ho an'ny tsy fandeferana maro, mora sy haingana amin'ny Thermomix.
Manaikitra dibera ny voanjo sôkôla
Mora ampiasaina sy mora entina ireto manaikitra amin'ny dibera sôkôla ireto. Mety amin'ny fisakafoanana kely any am-piasana.
Ampianarinay anao ny fomba hanamboarana burger vegetarian tsara vita amin'ny zucchini, mofo kely ary fromazy Parmesan. matsiro
Nugget akoho sy kasety
Ny fanomanana nuggets sasany ao an-trano miaraka amin'ny akora tsara dia tsy lafo be. Androany dia hataonay amin'ny akoho, saosy ary voatabia maina. Ary avy eo ... namboarina!
Cheesecakes nectarine kely mivaingana
Tsindrin-tsakafo fahavaratra izay ho tian'ny fianakaviana iray manontolo. Izy io dia vita amin'ny voankazo, yaorta, ricotta, cookies ... ary azontsika atao ny manolotra azy amin'ny tarts na amin'ny endrika lolly.
Spirals miaraka amin'ny crème Parmesan sy safrona
Tsotra sy matsiro, toy izany ny paty fanosotra Parmesan sy safrona mahafinaritra. Hanomana azy ao anatin'ny 30 minitra ianao ary tsy mampiasa afa-tsy Thermomix.
Gilasy tsotra akondro
Fiomanana tena tsotra mifototra amin'ny akondro, siramamy ary yaorta. Izy io dia manana endrika mamy ary azo aroso toy ny gilasy.
Aiska gilasy sy yaourt
Ankafizo ny vanin-taona mafana miaraka amin'ity gilasy yogora serizy ity. Tsindrin-tsakafo mamy, miaraka amin'ny akora 3 fotsiny ary vonona ao anatin'ny minitra vitsy miaraka amin'ny Thermomix.
Ice creamy vita amin'ny frezy sy crème fraîche
Amin'ity gilasy frezy sy crème fraîche ity dia hanana tsindrin-tsakafo malefaka sy malefaka ary feno tsiro ny tsiro ianao. Mora be koa ny manao azy amin'ny Thermomix anao.
Mayonnaise Blueberry ho an'ny Sandwich sy Snacks
Amin'ity mayonnaise manga ity dia azonao atao ny manampy tsiro sy loko amin'ny sandwiches sy sandwiches anao. Mora be ny manao amin'ny Thermomix anao.
Niely ny carrot labneh
Amin'ity labneh sy karaoty ity dia hiparitaka ianao ary hanana rendrika mora sy vaovao amin'ny fisakafoanana tsy ara-potoana na ...
Spinach, blueberry ary leggie pie
Miaraka amin'ny koba vita an-trano sy famenoana vita amin'ny epinara sy voanjo. Ity ny empanada azontsika ampiarahina amin'ny saosy yaourt tsotra.
Vatan'ny akondro haingana
Hadinoy ny bain-marie sy ny fandrahoan-tsakafo lava noho ity flan'akondro haingana ity. Mora, tsotra ary feno tsiro.
Flan voanio Vegan
Amin'ity flan voanio vegan ity dia hankafizanao tsindrin-tsakafo mora sy tsotra ary mora ampiasaina amin'ny vegan sy lactose ary atody tsy atody.
Roscón tsy misy atody
Roscón manana endrika hafa izay tsy misy atody amin'ireo akora ao anatiny. Izy io koa dia tsy misy voankazo misy vatomamy: almond sy hazelnut ihany no hapetrantsika.
Mofo mamy Noely tsy misy gluten
Amin'ity mofo Krismasy mamy ity dia azonao atao ny manomana sakafo maivana tsy misy gluten matsiro mandritra ireo fialantsasatra ireo. Aroso miaraka amin'ny sôkôla mafana ary ankafizo!
Morrococo na "voankazo dizzy"
Humickus Chickpea vita amin'ny Jaen, fantatra amin'ny anarana hoe Morrococo, Garbanzos Mareaos na Puchero Mareao. Fanombohana na tsakitsaky tsotra sy matsiro.
Mofomamy tahini orange
Ao an-trano dia araraotinay ny faran'ny herinandro handrahoana zavatra matsiro toy ireto cookies cookies tahini sy orange ireto. Tianay ny mitsabo ny tenanay amin'olon-kely amin'ny fotoana fihinanan-tsakafo. Ireo cookies cookies tahini volomboasary ireo dia tonga lafatra amin'ny fanomezana sakafo matsiro ho an'ny tenanao amin'ny fotoanan'ny tsakitsaky. Haingana sy mora atao.
Vary mahafinaritra miaraka amin'ny hazan-dranomasina, mora, haingana ary tsy lafo. Mety hametrahana ny famaranana amin'ny sakafom-pianakaviana amin'ny faran'ny herinandro.
Panellets legioma rakotra sôkôla
Amin'ireto panellets voasaron'ny sôkôla vegan ireto dia ho hitanao fa tsotra sy mahafinaritra ny manomana fomba fahandro nentim-paharazana ho an'ny All Saints and Deceased. Ireo paneleta vegan dia mora miomana amin'ny Thermomix ary mamela anao hankafy ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana All Saints and All Souls Day.
Mofom-paty misy sombin-paoma sy sôkôla
Mila manandrana ity mofom-boaloboka ity ianao. Tsiro ny kanelina sy tsaramaso anise ka tonga lafatra amin'ny fanokafana ny fahalavoana. Hanampy ny mofomamy spaonjy ihany koa izahay amin'ny kanelina sy anis. Fa manana paoma, sôkôla vita amin'ny sôkôla ihany koa, ary etona avy eo amboniny. Tonga lafatra amin'ny volana fararano
Porridge ovy, lettuce ary lafarinim-bary
Ny fieritreretana ny kely indrindra ao an-trano dia nanomana bubur ovy, salady ary lafarinim-bary aho ...
Kakao sy mofomamy kafe, tsy misy atody
Mofomamy spaonjy misy tsiro mahery, miaraka amin'ny kakaô sy kafe mangidy. Mety ho an'ireo tsy mahazaka atody ary koa vegans, soloina legioma ny rononon'omby.
Tsy voatavo na mofomamy karaoty ... Ny lokon'ny volon'ity mofomamy ity dia vokatry ny turmerika. Mitovy amin'ny voasarimakirana izy io ary tsy misy masirasira atody na simika.
Mofomamy misy rano sy kakaô ary voanio
Mofomamy tsy misy ronono, tsy misy dibera tsy misy atody fa misy tsiro be dia be noho ny voanio sy kakaô. Tsara ho an'ny sakafo maraina sy tsakitsaky.
Jereo hoe ahoana no fomba hanamboarana ny fomba fahandro tandoori masala anao. Afaka mankafy ny tsiro amin'ny sakafo Indiana sy Pakistaney ianao nefa tsy miala ao an-trano.
Sosy Chickpea miaraka amin'ny tsaramaso sy legioma malalaka
Soso-pisakafoanana trondro haingana sy mora miaraka amin'ny tsaramaso sy legioma. Sakafo Vegan vita amin'ny Thermomix ho anao rehefa lany ny hevitrao.
Mavozavo akondro voaroy
Ny smoothie frezy sy akondro dia matsiro ary hanome ny tsara ny voankazo rehetra. Haingana sy mamelombelona ... aza adino !! Lazainay anao koa ny fananany ary raha mampihena ny lanja na mampihena ny lanjany.
Legioma voatabia miaraka amin'ny saosy amandy
Amin'ireto legioma mihombo miaraka amin'ny saosy amandy dia hanana sakafo hariva vegan sy salama ary maivana ianao. Ny fikarakarana ny tenanao amin'ny Thermomix dia tena mora.
Noho io fomba fahandro io dia hamadintsika ireo florets cauliflower ho manaikitra tsy mahazaka. Izy io dia koba matsiro izay tsy misy atody.
Tsindrin-tsakafo persimmon miaraka amin'ny crème
Ny fanomanana tsindrin-tsakafo manokana dia mora raha manana Thermomix isika. Ny porofo dia ireto vera persimmon kely misy crème ireto. Andramo izy ireo, mahafaly azy ireo izany!
Omelette tsy misy atody
Ho hitanao eto ny tetika rehetra hanaovana omelette tsy misy atody miaraka amin'ny Thermomix. Fomba fahandro tena ilaina amin'ny vegans sy ny tsy fandeferana atody.
Lasagna miaraka amin'ny atody sy fromazy feta
Lasagna Bolognese mahazatra miaraka amina fihodinana hafa: miaraka amin'ny aubergine sy fromazy feta. Mety gaga sy miomana amin'ny fialantsasatra ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Truffle sôkôla sy kafe
Ireto troloha sôkôla sy kafe ireto dia fitsaboana kely tsotra sy haingana hanaovana fisaorana an'i Thermomix. Ny fanomezana tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra.
Baolina angovo tsy misy voanjo
Ireto bolan'ny angovo tsy misy voa ireto dia manana tsiro sôkôla matsiro. Mora sy haingana be izany fa na ny kely aza dia afaka manampy anao.
Mousse sôkôla miaraka amin'ny aquafaba
Mousse sôkôla tsy misy atody! Vita amin'ny aquafaba izy io ary misy tsiro tsy tantiny. Mila manandrana ianao, tena fahitana izany.
Lactonese misy ronono mihena
Amin'io lactonese vita amin'ny ronono mihena io dia afaka mankafy ny resipeo amin'ny fahavaratra ianao satria tsy atahorana ho voaloton'ny salmonellosis.
Vola voanio, karaoty ary kasety
Voanio voanio, karaoty ary cashew mahafinaritra miaraka amin'ny 43 kcal fotsiny hanaikitra sy hanota amin'ny fomba mahasalama nefa tsy manenina
Apple cupcakes tsy misy atody!
Tsy atody izy ireo ary mbola matsiro. Tian'izy ireo ny ankizy kely, ny zokiny ... ary vonona izy ireo tsy misy kitapo na lasitra
Andramo ity "aisy gilasy" yaourt sy melon tsotra ity. Maivana, mamelombelona, ​​mora omanina ary, ahoana no tsy hahatongavany raha tsy izany, ... tsara!
Sakafo vita amin'ny fromazy sy sôkôla
Tsindrin-tsakafo tsotra, mora ary haingana hanomanana, feno kalsioma ary tian'ireo kely indrindra, indrindra raha ampiarahintsika amin'ny sôkôla!
Mango, macadamia ary voanio
Miaraka amin'ireny manga, macadamia ary voanio ireny dia hankafy sakafo mahasalama mahasalama miaraka amin'ny tsiro rehetra any amin'ny tany mafana ianao. mora atao amin'ny Thermomix.
Voankazo namboarina sy tsaramaso jelly vita an-trano
Ny voankazo sy ny siligaoma vita an-trano dia mahasalama, mahafinaritra ary mety amin'ny tsy fandeferana sy vegan. Ataovy amin'ny voankazo tianao izy ireo.
Mofomamy karaoty tsy misy atody
Malalaka ny atody fa feno tsiro. Miaraka amin'ny karaoty, voanjo, zava-manitra ... mofomamy matsiro izy ireo ary mbola manankarena miaraka amin'ny yaourt grika iray sotro fihinana.
Resipeo mamy 9 tsy misy atody
Fametrahana miaraka amina resipeo mamy 9 tsy misy atody ary vita amin'ny Thermomix. Lavorary ho an'ireo izay tsy afaka mandray an'io fangaro io.
Holatra Portobello feno zava-maniry, sakay ary sokay
Holatra portobello marefo feno volo misy sakamalao sy sakay mena. Fomba fahandro mahaliana tena mahagaga ny fisakafoanana mahafinaritra indrindra.
Croquette vary malemy
Ny fanomanana an'ireny karazan-trondro malemy ireny dia tsotra, tsy misy atody ary atao ao anaty lafaoro. Ny valiny: lovia fampiasana 10 !!
Aubergine sy pate holatra
Ity aubergine sy pate holatra ity dia malama sy matsiro. Namboarina tamin'ny legioma ary mety amin'ny vegans, celiacs ary ireo izay tsy mahazaka atody sy ronono.
Bacon sy holatra risotto
Jereo ny fomba fahandro an'ity holatra matsiro sy mamy ity ary misy endrika hafa ao amin'ny Thermomix anao. Mety amin'ny dingana faharoa.
Atody sy voatabia caponata
Amin'ity aubergine sy voatabia capona ity dia hahagaga anao ny vahininao nefa tsy hanasarotra ny tenanao ao an-dakozia. Fomba fahandro tena tsotra sy marobe.
Mofomamy yaourt sy melon
Mofomamy yaorta mamelombelona sy tsotra ary manintona. Tsy mila fatana izy io ary haingontsika amin'ny voankazo tiantsika indrindra io.
Yaorta voasary volomboasary sandoka
Ny andro iray lasa izay, namaky anay ny mpamaky Carmen hevitra momba ny fomba fahandro ho an'ny yaorta voasarimakirana mangataka anay raha ...
Spaghetti Wholegrain miaraka amina akoho sy makamba
Spaghetti amin'ny endriny tsy mitongilana, miaraka amina akoho, trondro ary artichoke, nosasana tamin'ny saosy hazan-dranomasina sy divay fotsy.
Vary lasopy misy kaody sy ovy
Vary lasopy misy kaody sy ovy, fomba fahandro nentim-paharazana nahandro Espaniola, manetry tena sy tsotra, nefa tena matsiro, mahasalama ary matsiro.
Mofom-bary sy sôkôla fotsy
Fomba fahandro tsotra sy tany am-boalohany ho an'ny volom-bary misy tsiro sokola fotsy. Tsindrin-tsakafo izay azontsika atao maivana kokoa raha ampifangarointsika amin'ny yaorta voajanahary.
Paty misy patsabe sy saosy masiaka
Paty matsiro miaraka amin'ny tsiro an-dranomasina, miaraka amina saosy voatabia an-tranony, patsabe ary voatabia tongolo mangatsiaka.
Fampivoarana vaovao momba ny volom-bary nentim-paharazana izay ampianay paoma iray miaraka amin'ny vokatra mamy, matsiro ary matsiro.
Tehina voaroy mofomamy misy lactonese masiaka
Tsoraka baranjely voaendy crispy, miaraka amina saosy lactonese matsiro miaraka amina masiaka. Mety amin'ny fahavaratra.
Lemon Chicken Koftas
Koftas akoho voasarimakirana dia ambany kaloria ary manana fampisehoana tena izy. Jereo hoe ahoana no fanaovana azy ireo tsy misy fahasarotana.
Ireo atody miaraka amina kapoaka Indiana
Aubergine voadoboka zava-manitra hafakely izay hitondra antsika ho any afovoan'i India: garam masala, asafetic ary, kari, mazava ho azy.
Solomaso fanosotra marika Brandade
Ireo vera misy menaka fanosotra marika dia misy volon-koditra manaitra izay mahagaga. Jereo ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny Thermomix sy hankafizanao ny tsironao.
Laisoa misy hena sy saosy yaorta miaraka amin'ny mint
Laisoa saosy matsiro miaraka amin'ny hena sy saosy yaorta ary mint. Mety ho an'ny sakafo mahasalama ary hiomanana mialoha.
Pofom-bary ho an'ny ankizy
Sakafo masom-bary izay tena tian'ny ankizy kely. Mora mivelatra izy ary mora zatra ny tsiro sy ny filan'ny ankizy.
Ovy andrahoana zanak'ondry
Sakafo lehibe misy ovy voaendy vita amin'ny Thermomix. Fomba nentim-paharazana sy mora hanomanana lovia izay ho vonona afaka 30 minitra
Tsindrin-tsakafo matsiro sy mamelombelona vita amin'ny voankazo mangatsiaka na yaorta mamy. Mety ho an'ny ankizy kely mihinana voankazo.
Alergika amin'ny voankazo sy voanjo? Atorinay anao ny fomba fanamboarana bara sôkôla matsiro ho an'ny sakafonao tsy misy lafaoro.
Jereo ny fomba fahandro hanamboarana manaikitra tsotra momba ny quinoa. Mety amin'ny vegan sy tsy misy atody, dia fomba fahandro mora sy mahasalama. Jereo ny recette tsikelikely.
Kitapo volomboasary ho an'ny sakafo maraina
Donuts volomboasary tsy misy atody, miaraka amin'ny lafarinina varimbazaha sy voaendy. Tonga lafatra amin'ny fanobohana ronono, mety amin'ny sakafo maraina izy ireo.
Voaroy paoma Stroberiana
Voaloboka sy paoma mahavariana sy mamelombelona, ​​mety tsara amin'ny andro mafana. Tonga lafatra ho an'ny sakafo ambany kaloria.
Kitapo kakao voaendy
Donot kakaô tsotra tsy misy atody ary andrahoina amin'ny lafaoro. Lavorary hosotroina amin'ny ronono ho an'ny sakafo maraina sy ny sakafom-pisakafoanana. Tian'ny ankizy izy ireo.
Ovy misy anana goavam-be sy tongolo lay
Mangataka sakafo mahasalama anao ve ny vatanao? Andramo ity fomba fahandro ovy ity miaraka amin'ny maitso turnip sy tongolo lay. Ho tianao ny fahatsorany sy ny tsirony.
Raha cannellonioma legioma mamy sy be ronono no tadiavinao dia ity ny fomba fanamboarana hanaovana azy amin'ny Thermomix anao.
Mofo voasary haingana
Mofo masiaka haingana mety tsara ho an'ny vao manomboka, tena mora, miaraka amin'ny tsiro volomboasary. Vonona ao anatin'ny 45 minitra, tsy misy masirasira, tsara ny miaraka amin'ny foie gras sy fromazy.
Mofomamy tiramisu voaroy
Te-hanamboatra tsindrin-tsakafo miaraka amin'ireo ankizy kely hankalazana ny fetin'ny ray ve ianao? Topazo maso ity Strawberry Turamisu Tart ity.
Sôkôla mafana kanelina
Ianao ve mitady zava-pisotro manokana miaraka amin'ny vatomamy mahazatra? Andramo ity sôkôla mafana kanelina ity. Zava-pisotro matsiro hamindroana.
Mila fomba fahandro hafanana ve ianao nefa tsy miala amin'ny sakafo? Andramo ity lasopy voatabia feno vitamina sy otrikaina ity.
Saosy vaovao avy amin'ny sakafo indianina, vita amin'ny yaorta voajanahary sy kôkômbra. Mety miaraka amin'ny lovia misy masiaka.
Pasta miaraka amin'ny salmon sy tuna
Pasta mahasalama sy maro loko, vita amin'ny tuna am-bifotsy sy salmon mifoka, miaraka amin'ny legioma sy rosemary.
Mpangarom-boanjo daty feno voa
Mila recette tsy misy atody sy ronono ve ianao? Atolotray anao ny datin'ny varimbazaha iray manontolo sy ny biskotin-kenatra vita amin'ny Thermomix.
Manahy ny hihinana sakafo mahasalama sy mahasalama ve ianao? Atolotray anao ireo burger oatmeal vegan matsiro.
Saosy sôkôla mahafinaritra vita amin'ny Thermomix. Mety miaraka amin'ny voankazo vaovao, voankazo maina, gilasy, mofomamy, mofomamy, yaorta ...
Seleria sy ronono fanosotra fromazy
Fialam-boly mahafinaritra izay anaovan'ny rantsan-kazo seleria ao anaty fitoeram-boaloboka ary anaovy crèmezy fromazy matsiro (Gorgonzola sy ricotta)
Paoma sy gilasy voanio ao anatin'ny 5 minitra
Tsindrin-tsakafo hafahafa sy mamelombelona izay mety indrindra ho an'ny sakafo miaraka amin'ny namana. Hanana glasy piña colada matsiro ianao ao anatin'ny 5 minitra.
Kibbeh, henan-kena Lebaney
Kibbeh Libaney mahafinaritra, vita amin'ny henan'ondry, bulgur ary zava-manitra. Mety miaraka amin'ny saosy yaourt sy mint.
Mofomamy spaonjy voasarimakirana (tsy atody)
Ampianarinay anao ny fomba hanaovana mofomamy voasarimakirana vegan. Tsy atody sy ronono io fa misy tsiro sy endrika tsy tantiny.
Quinoa miaraka amin'ny holatra sy ahidrano
Quinoa miaraka amin'ny holatra sy ahidrano dia lovia mora omanina ary fomba fahandro tena anti-homamiadana mety amin'ny vegano.
Sweet focaccia tototry ny frezy, mora mamy ao amin'ny Thermomix ary tsy mahatohitra.
Paoma, poara ary voaloboka
Compote iray manokana izay ampiarahina amin'ny volon-paoma misy tantely sy ampongaben'ny pear sy ny voaloboka.
Chicken Biryani (vary akoho indiana)
Biryiani akoho tena izy: lovia vita tamin'ny vary basmati, akoho efa nohamainina ary zava-manitra matsiro, nasiana saosy yaourt daholo.
Mofomamy sôkôla Vegan (tsy misy atody)
Mofomamy sôkôla vegan matsiro, vita tsy misy atody. Tonga lafatra ho an'ny rehetra, na dia amin'ny sakafo vegan sy ho an'ny ankizy tsy mahazaka atody aza.
Mofomamy legioma miaraka amin'ny paoma sy amandy
Mofomamy spaonjy spaonjy, vita tsy misy atody, misy ronono legioma sy menaka oliva. Mety ho an'ireo tsy mahazaka atody na ho an'ireo izay tsy misotro rononon'omby.
Hummus avy any Egypt, vita amin'ny pitipoà. Fahafinaretana manana ho starter sy ilaina ho an'ny vegans.
Pancakes zucchini voaendy (tsy atody)
Amin'ity fampifanarahana ity dia mahazo pancakes zucchini tsy misy atody salama kokoa isika ary mety ho an'ireo izay mahazaka atody.
Broccoli misy steamed miaraka amin'ny vinaigrette voasary
Ity fomba fanamboarana broccoli mahandro ity dia hanampy antsika hanonitra ny tafahoatra amin'ny fahavaratra. Izy io dia aroso miaraka amin'ny vinaigrette voasary manitra sy matsiro.
Miarova amin'ny karier amandy marefo
Hake matsiro voaravaka amandy mangatsiatsiaka sy curry am-paosy iray. Afaka 5 minitra ianao hanangonana azy ary 15 handrahoana azy.
Ny crème avocado dia resipeo misy menaka tsy manam-paharoa izay hanampy antsika hanana sakafo mahasalama amin'ny fahavaratra.
Voaloboka sy ranom-boasary frezy
Ity ranom-boaloboka sy ranom-boasary ity dia fanapoahana tsiro tena izy hanombohana ny maraina amin'ny angovo sy tanjaka be.
Paoma amin'ny divay fotsy
Paoma nandrahoina tamin'ny divay fotsy, rano sy siramamy. Azontsika antsoina hoe paoma syrup izy ireo. Manompo anay izy ireo handray azy ireo ho tsindrin-tsakafo na hanamboarana fomba fahandro hafa.
Voasarimakirana sy gilasy voasarimakirana
Miaraka amin'ireo akora tsotra ary ao anatin'ny 5 minitra latsaka dia hanana ny fotony ianao hanomanana sokay sy gilasy voasarimakirana mamy sy mamelombelona.
Ianaro ny fomba fanaovana cookies dibera namboarina, manaraka ny fomba fahandro soedoà nentim-paharazana
Fihozongozonana tsotra sy lafo vidy feno vitamina: frezy, paoma ary ronono. Mety ho an'ny sakafon-tsakitsaky ny ankizy kely. Mora be ny manao amin'ny Thermomix anao
Lovia Parma nentim-paharazana misy aubergine, fromazy Parmesan, parmesan ary saosy voatabia azo aseho eo ambony latabatra na mafana na mangatsiaka.
Zucchini sy crète leek
Krema zucchini malefaka sy maivana ary zana-trondro misy ronono, sira ary nutmeg. Azontsika atao ny manompo azy amin'ny menaka oliva sy croutons.
Kambana couscous miaraka amina legioma sy voanjo, mety indrindra ho an'ny vegan sy vegetarian ary ho an'ireo izay manaraka sakafo ambany kaloria.
Dorada ao aoriana ao Varoma
Saron-dranomasina tsotra sy mahasalama voaomana ao ambadika, voaravaka dipoavatra sy tongolo. Mety ho an'ny sakafo ambany kaloria.
Volom-boasary sy sakamalao
Tsindrin-tsakafo haingana sy matsiro izay hampamiratra ny sakafonao. Ao anatin'ny 5 minitra fotsiny dia efa nanomana tsindrin-tsakafo tena mamelombelona sy mahafinaritra ianao.
Sakafo misy tongolo lay
Ireto angisy ireto dia tonga lafatra amin'ny alàlan'ny aperitifa na koa dingana faharoa raha manome haingo azy ireo, ohatra, ny vary.
Kaopy sôkôla tsy misy lactose telo
Andiany iray amin'ireo mofomamy sôkôla telo tsy misy lactose, na atody, manokana ho an'ny tsy fandeferana ary mitovy matsiro
Fonosana kisoa miaraka amin'ny saosy karizy
Ny fonon-kisoa miaraka amin'ny saosy curry dia fomba fahandro tena mahandro sy tena feno. Ary izany dia feno tsiro ivelany ihany koa.
Navoakanay indray ny saosy pesto nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny persily, izay hanome fikitika hafa ny lovia patoanao.
Quinoa miaraka amin'ny legioma miaraka amin'ny voasarimakirana
Quinoa mamy miaraka amina legioma sy hanitra sitroma. Mety amin'ny lovia lehibe, mahasalama sy mandanjalanja. Tonga lafatra ho an'ny sakafo ambany tavy sy vegan.
Tenderloin sy tsaramaso maitso misy saosy yaourt
Ny tsaramaso malefaka sy tsaramaso maitso misy saosy yaourt dia lovia iray manontolo izay atambatra ny proteinina sy vitamina ary ho vonona ao anatin'ny 30 minitra ianao.
Paska Mona tsy misy atody ary tsy misy ronono
Fomba fahandro manokana mofomamy Paska tsy misy atody ary tsy misy ronono ho an'izay rehetra tsy mahazaka, tsy mahazaka alikaola na manaraka sakafo vegan na legioma.
Ahaingo amin'ny ovy roa ny ovy
Fomba fahandro mahafinaritra ho an'ny ovy haingo, crispy ety ivelany ary malefaka ao anatiny, matsiro be noho ny fitafiana sy fandrahoan-tsakafo roa.
Spaghetti misy hazelnut sy saosy poivra
Ny spaghetti miaraka amin'ny hazavozavo sy saosy dipoavatra dia lovia iray izay ampifangaroana tsara ny tsiron'ireo fangaro rehetra.
Veganesa: mayonnaise vegan
Veganesa dia saosy mayonnaise vegan, vita amin'ny ronono soja, menaka tanamasoandro, sira ary voasarimakirana. Haingana sy mora.
Artichoke miaraka amin'ny ovy sy ham
Malemy ny artichokes ary mety tsara ny ovy. Izany rehetra izany dia nandro tamin'ny saosy matsiro, izay ivoho no miakatra eo afovoany. Ary mora atao!
Ny crème manitra miaraka amin'ny pitipoà dia fomba fahandro maivana ary mora voaomana. Mety ho an'ny olona te hikarakara ny sakafony.
Malama malama amin'ny frezy miaraka amin'ny frezy sy kiwi
Ny voankazo Kiwi Spring Smoothie dia manana voankazo sy yaourt tsara indrindra. Noho ny tsirony sy ny endriny misy crème, dia ho lasa tsakitsaky matsiro izy.
Voankazo voatavo sy ovy
Voatavo sy voatavo ovy izay mora karakaraina, maivana ary miaraka amina endrika mahafinaritra. Namboarina tamin'ny akora tsotra izy ary ankafizin'ny fianakaviana iray manontolo.
Manokana na akoho a la meunière
Irery a la meunière mahafinaritra, miaraka amin'ny voasarimakirana, dibera ary saosy persily matsiro. Rehefa masaka ao anaty varoma dia trondro be ranony no mijanona.
Karaoty vita amin'ny karaoty sy voatabia
Ny karaoty sy ny crème voatabia dia miavaka amin'ny lokony izay manondro fa feno vitamina, mineraly ary becarotenes avo lenta izy.
Risotto miaraka amina divay rosso
Risotto mahafinaritra misy divay mena. Tsotra be satria tsy misy ron-kena akoho na legioma, fromazy Parmesan ary, singa fototra, divay mena tsara
Voasarimakirana voasary sy akondro
Voasarim-boasary sy akondro matsiro izay azontsika ampiasaina amin'ny sakafo maraina na hanomanana sakafo mamelombelona mamelombelona.
Ny fanorohana Lady dia zava-mamy nentim-paharazana avy amin'ny faritr'i Piedmont any Italia. Manaikitra mahafinaritra vita amin'ny akora tsotra.
Fomba fahandro fototra: ovy nopotsehina namboly
Ny puree ovy mampanan-karena dia fanomanana tsotra, izay mahandro ny ovy amin'ny ronono amin'ny hafanana ambany, hahazoana puree matsiro matsiro
Krema epinara béchamel
Krema epinara am-boalohany miaraka amin'ny saosy béchamel, mety indrindra ho an'ny mpihinan-kena, ankizy ary olona manaraka sakafo ambany kaloria.
Squid miaraka amin'ny whisky
Soso-tsiro matsiro vita amin'ny saosy fanosotra ary kitapo whisky tena izy. Tonga lafatra miaraka amin'ny ovy na vary.
Krema maivana maharitra
Krim-pahazavana mahasalama sy matsiro vita amin'ny escarole. Lovia mahasalama ho an'ny kaloria tena bitika sy vitamina sy otrikaina betsaka.
Fanosotra karaoty sy vary
Krosy malefaka sy malefaka misy karaoty misy vary, ambany kaloria ary matsiro. Izy io dia azo aroso miaraka amin'ny croutons ary tsy misy vokatra vita amin'ny ronono.
Meksikana sakay con carne burritos
Burritos tex-mex matsiro feno sakay con carne, voaravaka fanosotra marikivy sy fromazy miempo.
Mousse yaourt miaraka amin'ny voankazo vaovao
Mousse yaourt izay azo aroso miaraka amin'ny mofomamy spaonjy, jam ary / na voankazo vaovao.
Sushi II: foza, avokado ary makia fromazy fanosotra
Sushi-makis, tototry ny foza, avokado ary fromazy fanosotra. Mety amin'ny sakafo hariva na fanombohana sakafo Japoney tena izy.
Akoho sakamalao miaraka amin'ny couscous
Akoho matsiro misy savony sy saosy soja, atolotra miaraka amin'ny couscous
Tangerine sy jamam-cardamom
Mora ny miomana, manana tsiro malefaka izy io, tsy marikivy ary miaraka amin'izay koa. Ity jamam mandarin sy cardamom ity dia natao ho tian'ny tsirairay.
Paoma sy legioma fanosotra
Ny paoma sy legioma fanosotra dia fomba fanamboarana sahaza ho an'ny anana sy legioma izay hanampy antsika hitazona sakafo mahasalama sy mahasalama
Randrana Krismasy mahavariana vita amin'ny Thermomix, miaraka amin'ny lafarinam-boaloboka (amandy izay kosehintsika) ao anaty koba ary tsy atody. Tena tsara.
Koba fanaovana udila sy foza
Ny fitaratra an-kalamasy sy foza dia misy fampisehoana am-boalohany sy kanto. Izy io dia hanampy antsika hifehezana ireo servisy alefa mba tsy hihoatra izany amin'ny Krismasy.
Risotto amin'ny fomba grika tsara sy matsiro, vita amin'ny fromazy feta, oliva mainty ary yaorta grika. Mamy sy mahafinaritra amin'ny lanilany.
Voanjo ho an'ny paty
Ny saosy walnut dia natao tao anaty indray mipaka ary azo aroso amin'ny vary na paty. Tonga lafatra ho an'ny vegetarian, vegan ary hampidina ny kolesterola
Polvorones miaraka amin'ny Thermomix
Polvorone nentim-paharazana sy nentim-paharazana miaraka amin'ny tsiro ny Krismasy. Mora ampiasaina amin'ny Thermomix izy ireo, miaraka amin'ny akora tsotra.
Solomaso ovy misy saosy bolognese
Fanombohana mahafinaritra, natao ho vera kely ovy nopotsehina sosona feno saosy Bolognese.
Sushi II: makia zavokà sy makamba ao tempura
Sushi-makis, tototry ny makamba amin'ny tempura, avocado ary kôkômbra. Mety amin'ny sakafo hariva na fanombohana sakafo Japoney tena izy.
Tongotry ny zanak’ondry minono ao anaty vilany roa
Tongotra zanak'ondry mampinono sy mamontsina, natsatsika tamin'ny varoma sy tao anaty lafaoro. Mety indrindra ho lovia lehibe amin'ity Noely ity.
Mussel misy holatra tsy ampy rano
Mussel miaraka amin'ny holatra tsy ampy rano dia ranomasina sy lovia an-tendrombohitra izay azontsika omanina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Salama, voajanahary ary ambany kaloria.
Dolmas: ravina tototry ny hena sy ny vary
Dolmas exotic, vaovao avy any Torkia, mety indrindra ho an'ny làlana maivana sy ho an'ny sakafo hariva.
Sakafo hena turôna
Ny henan-kisoa sy ny hena prune dia manana tsiro fahalavoana tsara mitambatra. Araho miaraka amin'ny haingo tianao indrindra ary hanana lovia tena feno ianao.
Sakafo matsiro sy sôkôla
Ny hanina mandarin sy sôkôla no fanarahana lafatra amin'ny takelaka. Ireo tsiro ireo dia mety tsara ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.